Halyayga Arsenal Parlour oo ka warbixiyay waxa uu u baahan yahay Unai Emery inuu sameeyo si uu u sii hormariyo Gunners – Gool FM
Halyayga Arsenal Parlour oo ka warbixiyay waxa uu u baahan yahay Unai Emery inuu sameeyo si uu u sii hormariyo Gunners
(Arsenal) 19 Nof 2018. Laacibkii hore kooxda Arsenal ee Ray Parlour ayaa tilmaamay in Gunners ay haatan ku socoto wadada saxda ah la shaqeynta macalinka reer Spain ee Unai Emery.
Dhinaca kale halyayga kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal Ray Parlour ayaa sheegay in Gunners ay ay u baahan tahay labo ama saddex suuq ee soo aadan si ay ula soo wareegto ciyaartoyda ay ka dooneyso.
Macalinkii hore kooxda Paris St Germain ayaa wuxuu awooday in uu jawi guuleed kula bilaawdo xili ciyaareedkiisa ugu horeeyay ee kooxda Arsenal, isagoo ilaa iyo haatan ah 16 kulan ee guuldaro la’aan ah.
Arsenal ayaa ilaa iyo haatan ku jirta kaalinta 5-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League ka dib 12 kulan ilaa iyo haatan laga soo ciyaaray, waxayna ka heleen 24 dhibcood.
“Waxaan qabaa in kooxda ay haatan ku socoto wadada saxda ah”.
“Cid kasta haatan way isku xiran tahay, jamaahiirta waxay ka gadaaleeyaan kooxda, waana arin muhiim ah”.
“Xilli ciyaareedkii hore, waxaan aragnay in jamaahiirta aysan imaan jirin kulamada, balse haatan si lama filaan ah qof walba wuxuu doonayaa inuu daawado kulamada”.
“Sidaas darteed, waa inaad u ogolaataa macalinka labo ama seddex suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, sababttoo ah waxaa jira ciyaartoy badan uu macalinka isha ku hayo haatan isla markaana uu doonayo inuu lasoo wareego”.
“Way adag tahay in la diido Barcelona, sababtoo ah waxaan doonayay inaan la saaxiibo Messi”
SAWIRRO U GAAR AH GOOL FM: Xulka Qaranka Soomaaliya oo Tababarkii ugu dambeeyay ku sameeyay Jabuuti ka hor kulankooda Itoobiya